Fikendrena sokajin’olona :: Nokaramaina telo tapitrisa ariary tsirairay ireo mpaka varira - ewa.mg
Fikendrena sokajin’olona :: Nokaramaina telo tapitrisa ariary tsirairay ireo mpaka varira
News - Fikendrena sokajin’olona :: Nokaramaina telo tapitrisa ariary tsirairay ireo mpaka varira
Olona efatra no voasambotra, tany Mandabe, Andohan’Ilakaka, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, nandritra ny hetsika manokana nikarohana ireo mpaka an-keriny lehilahy varira. Fianakavian’itsy niharam-boina ihany ny sasany ary nokaramaina telo tapitrisa ariary tsirairay.
“Nahazo angom-baovao momba ireo nahavanon-doza ny zandary taorian’ny nahavotsotra ny lehilahy varira nalaina an-keriny, andro vitsy lasa izay. Natao ny fikarohana ka fantatra fa tany Mandabe izy ireo. Tratra ny efatra. Ny fianakavian’ilay olona varira mipetraka any Ranohira no nampanantena telo tapitrisa ariary homena azy ireo aorian’ny fakàna an-keriny. Niitatra tamin’ny fisamborana ny tompon’ireo basy nampiasaina tamin’ny fakàna an-keriny ny hetsika”, hoy ny fanampimbaovao avy amin’ny Zandarimaria, any Andohan’Ilakaka.
Lehilahy varira 24 taona io lasibatra io. Nifanenjehan’ny fokonolona sy ny mpitandro filaminana ireo jiolahy. Velona mihitsy ny fifampitifirana saingy tafatsoaka ny mpaka an-keriny. Avotra soa amantsara rehefa nafenina tao anaty lavabato ilay tovolahy varira. Nifatotra ny tongony sy ny tanany. Nitampina ny vavany ary feno ratra tamin’ny vatany toa nampijaliana, araka ny loharanom-baovao. Tsy misy hatahorana ny ainy ankehitriny.
L’article Fikendrena sokajin’olona :: Nokaramaina telo tapitrisa ariary tsirairay ireo mpaka varira est apparu en premier sur AoRaha.
Depiote Rakotondrasoa Fetra : “Tokony hisy ny fitoniana politika amin’izao”
“Miombon-kevitra feno amin’ny filoham-pirenena ny amin’ny tokony hisian’ny fitoniana amin’ny lafiny politika amin’izao fotoan-tsarotra lalovan’ny firenena izao.” Izay ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny vaomieran’ny serasera eo anivon’ny Antenimierampirenena, ny depiote Rakotondrasoa Fetra, amin’ny fiatrehana ny ady amin’ny firongatry ny valanaretina Coronavirus, amin’izao fotoana izaoTokony hatsahatra ny fifandranitana; hatsahatra ny fifanenjehana; hatsahatra ny fanomezan-tsiny be fahatany ka mety hampisavoritaka ny saim-bahoaka amin’ny ankapobeny, hahatonga ny tsirairay mety tsy hifantoka amin’ny ady atao amin’ity aretina izay efa tena mihatra amintsika ity.Tsy misy olom-pirenena raha mbola Malagasy koa ka maniry ny hisian’ny toe-javatra sarotra toy izao iainantsika eto amin’ny firenena izao. Noho izany, tsy misy na iray mahazo tombony amin’ny fisiana fanampiny ankoatra izao fahasahiranana izao.Tokony hisy firaisankina eo amin’ny samy Malagasy“Eo amin’ny lafiny iray hafa, eo amin’ny samy Malagasy sy samy olom-pirenena: be ny mandalo fahasahiranana”, hoy izy. Ao ny mamoy havana na namana, ny sahirana amin’ny fitadiavana hanin-kohanina, ny mitsabo marary. Tokony hisy firaisan-tsaina sy firaisam-po ary firaisankina eo amin’ny samy Malagasy hahazoana mifanampy amin’ny fiatrehana ny ady amin’ny valanaretina sy ny tsy fahasalamana manjo izao.“Rehefa vita ny ady, afa-miverina amin’ny adihevitra politika isika”, hoy ihany izy. Tsy misy olana izany. Ankoatra ny hevitra politika, iombonany hevitra koa ny fampiharana ny lalàna amin’izay manararao-paty vokatr’izao aretina izao. Satria mitondra fanakorontanana eo anivon’ny fiarahamonina izany, mahatonga ny vahoaka hiraviravy tanana manoloana izao ady atao.Antsoiny ny tomponandraikitra amin’izany mba hampitsahatra ny varo-maizina, ny manararao-paty, ny fanararaotana maro isan-karazany vokatry ny fisian’ny valanaretina. Mba tena hifantoka sy hifanampy amin’izay fiatrehana ny aretina izay ny rehetra.R.Nd.L’article Depiote Rakotondrasoa Fetra : “Tokony hisy ny fitoniana politika amin’izao” a été récupéré chez Newsmada.
Tena hiaraka hirona
Iantefan’ny vava tsy ambina sy fanakianana mavaivay ireo mpilalaon’ny ekipam-pirenena malagasy, amin’ny baolina kitra na Barea, izay niatrika ny lalaom-bondrona farany any amin’ny Lalaon’ny Nosy, omaly antoandro. Misy ihany koa ireo mpankahery. Anjorony ihany izay resaka vokatra, na dia atao aza hoe tokony hahazo medaly volamena ny Barea, saingy hody aloha sahady. Tsy ny vokatra tamin’ity Lalaon’ny Nosy ity no inona, fa lesona kosa no tsoahina taorian’ny fahombiazana azon’ireo Barea, izay tody ampahefa-dalana tamin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika (CAN), tany Ejipta, farany teo. Ampy, angamba, izay ny fianteherana amin’ny fahagagana. Tokony ho efa manomboka mitelina traikefa ihany koa ny fitondram-panjakana raha manam-piniavana amin’ny fanaovana ho vaindohan-draharaha ny fanatanjahantena. Aleo havadika ho fanoitra amin’ny fanatsarana an’izay tsy nety ireny laza ratsy sasantsasany nahavoatonona ny anaran’ny delegasiona malagasy, tany Maorisy ireny. Tsy fahamatorana ihany no takiana, fa ny fametrahana mpitarika hentitra amin’ny fitondran- tena, ankoatra ny fampitoviana ny fikarakarana an’ireo atleta re- hetra. Raha nosokajiana ho ambanimbany lenta tsy tahaka ny akon’ny CAN kosa ilay Lalaon’ny Nosy, dia tsaratsara kokoa ny mijanona eto an-tanindrazana ihany amin’ny manaraka. Niharihary io mizana tsindrian’ila io teo amin’ny taranja baolina kitra. Tsy ailika any amin’ny fanjakana irery kosa ny rihitra fa samy sakaizan’ny mpandresy isika rehetra. Fotoana izao, sao afaka hapetraka amin’izay te hiara-hirona rehetra hoe tokana ihany ny Barea na inona na aiza no fifaninanana atrehany, na iza na avy aiza ireo mpilalao mandrafitra azy. Manomboka amin’ny vahoaka mpankafy sy mpanaraka ny Barea, miakatra amin’ireo rafitra isan’ambaratongany, mandalo amin’ireo mpanohana amin’ny lafiny samihafa, ary hatrany amin’ny faran-tampony. Azo eritreretina tsara ny manao fitaratra ny fitantanana ny Barea any amin’ireo taranja hafa, na tsy maninona raha ovaina ho Barea daholo aza ny iantsoana an’ireo ekipam-pirenena miaro ny voninahi-pirenena eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Aza atao hoe hiandry vokatra vao hanao izay mety, fa tokony hohajaina ny fenitra amin’ny fanomanana, toy ny ekipa teknika, fampivondronana, fampiantranoana, sakafo sy ireo fampangatsiatsiahana, fanamiana, ody am-bavafo… Ny tambim-bokatra kosa dia aoka izay namono ny voay no hiravaka ny vanginy. L’article Tena hiaraka hirona est apparu en premier sur AoRaha.
Avy any Azia atsimo atsinanana (Thaïlande sy Corée) dia hiverina any amy kaontinanta amerikana. Efa nivahiny tany Amerika avaratra (Etazonia indroa) sy Amerika atsimo (Brésil indroa) isika, ka ho any Amerika afovoany. Faritra ara-jeografia atao hoe «Caraïbes», na “La Caraîbe”, na “The Caribbean” (teny angalisy) no itondrana antsika. Hita ao ny tangoronosy (archipel) antsoina hoe “Les Antilles”. Nosy kely iray sy nosy salasalany iray hafa no itondrana antsika, dia Curaçao sy Jamaïque. Efa voasoritra mialoha araka ny programan’ny Conseil Oecuménique des Eglises COE, atao hoe « Decade to Overcome Violence » DOV, na Taona folo handresena ny herisetra, ny hanaovana fivorian’ny EDAN (Ecumenical Disability Advocacy Network) any amy faritra Caraïbes/Pacifique. Fanomanana fivoriana amy faritra EDAN samy hafa eran-tany no antom-pivoriana tselika tany Curaçao. Fivorian’ny COE naharitra andro maromaro kosa no natrehana tany Jamaïque taona vitsy taty aoriana. Caraïbes. Any amy faritr’i Caraïbes no misy ny tangoronosy Les Antilles: ny malaza sy lehibe dia Cuba sy Haïti ary Saint-Domingue. Mbola mamaritra an’i Caraïbes koa ireo firenen’ny kaontinanta Amerika afovoany manamorona ny atsimon’ny ranomasin’ny Antilles: Venezuela, Colombie, Panama, ary koa ireo tany mamaritra ny andilantany (isthme) Amerika afovoany: Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belize na Honduras Britanniques. Ny ampahan’i Mexique antsoina hoe Yucatan, tanjona saika nosy na presqu’île aty andrefana, ary any avaratra ny ilany atsimon’i Etazonia: Floride. Ny tangoronosy Bahamas, ireo Guyanes samy hafa mbola eo ambany zioga Eoropeana tandrefana (Holandey, Espaniola, Frantsay). Ambonin’izany rehetra izany ny ranomasina Caraïbes sy ranomasina Antilles ilany andrefan’ny ranomasimbe Atlantika. Bermudes. Tsy dia lavitra ny faritra ara-jeografia Caraîbes ao avaratra atsinanany no misy ny tangoronosy malaza antsoina hoe Bermudes na Bermuda. Tsy vitsy amintsika no mahafantatra ny lazan’ny “Triangle des Bermudes” na “Triangle du Diable”, izay niteraka resabe sy angano aman’arira teo amy loza fifamoivoizana an-dranomasina sy an’abakabaka. Izay mpamaky Jean Bruce sy Josette Bruce tamy fotoan’androny koa dia mahatadidy tsara ilay lohateny malaza hoe: “Interlude aux Bermudes pour OSS 117”. Razaka Manantenasoa Ralphine (Hitohy) Cet article Ny dian’ny mpivahiny: CURAÇAO SY JAMAÏQUE est apparu en premier sur déliremadagascar.
Impacts de la Covid-19 : Grande crise dans le secteur tertiaire marchand
Des gagnants et beaucoup de perdants. C’est le résultat des impacts de la crise de la Covid-19 sur l’économie malgache. Presque tous les secteurs d’activités économiques souffrent de la crise engendrée par la pandémie. Les difficultés rencontrées par les opérateurs ne sont pourtant pas les mêmes. D’après notre source qui travaille dans le domaine de la santé financière des entreprises, très peu de filières d’activité sont épargnées par la crise actuelle. « Avec le tourisme, le secteur tertiaire marchand est la plus grande victime de la Covid-19. Nous savons que la plus grande partie des produits commercialisés à Madagascar sont importés. A cause de la dépréciation de l’Ariary, les commerçants subissent des pertes liées au risque de change », a expliqué le spécialiste. En effet, la réduction des revenus des ménages, conjuguée avec l’inflation entraîne un important ralentissement du commerce. Selon l’expert, seuls les produits pharmaceutiques connaissent un succès, avec une croissance du chiffre d’affaires allant jusqu’à 300% pour les pharmacies. Chute libre. Le secteur des transports affiche également une récession, aussi bien du côté des transporteurs aériens que des transporteurs terrestres. Outre les marchés publics, les activités liées au secteur de l’immobilier et des BTP (Bâtiments et travaux publics) ont connu une chute libre, durant l’exercice 2020. De même pour le secteur financier. « Les activités financières ont ralenti. Les prévisions de trésorerie ont baissé, car les résultats nets de 2020 ont été réduits à cause des échelonnements et reports d’échéances imposés par l’Etat », a expliqué notre source. En ce qui concerne le secteur secondaire, la crise de la Covid-19 est surtout marquée par la compression du personnel, la baisse des activités et du chiffre d’affaires. « Beaucoup d’entreprises qui ont du mal à se relever sont très touchées par cette deuxième vague de Covid-19. Il y a de quoi s’inquiéter pour la survie de ces dernières, a indiqué l’expert. Peu touché. Cependant, le secteur primaire a été épargné en 2020, d’après toujours notre source. Selon les explications, les secteurs de la pêche industrielle, de l’agriculture et de l’agrobusiness réussissent, tant bien que mal, à maintenir leurs niveaux d’activité, malgré les contraintes et les surcoûts de transport, dans le processus de distribution et d’acheminement de leur production vers le marché. Antsa R. L’article Impacts de la Covid-19 : Grande crise dans le secteur tertiaire marchand est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Impacts de la Covid-19 : Grande crise dans le secteur tertiaire marchand a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Rakotomanga Eric: “Tokony hazava izay toherin’ny mpanohitra”
“Hanohitra inona marina aloha? Sa rehefa nifaninana tamin’ny fifidianana ka tsy voafidy dia tsy maintsy manohitra? Na hoe halako bika tsy tiako tarehy ny filoha ankehitriny, ka toherina na amin’ny fomba ahoana na ahoana. Tokony hapetraka mazava ny hoe: hanohitra inona?”Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny AKFM, Rakotomanga Eric, ny amin’ny toeran’ny mpanohitra amin’izao fotoana izao.Tsy fantatra mazava hoe: tena mijoro ho antoko na vondrona antoko ara-dalàna ve aloha ireo hoe mpanohitra? Ny minisiteran’ny Atitany koa tsy namoaka ny hoe: iza no nanao an’izay fametrahana ny antontan-taratasy ho mpanohitra izay?Ideolojia no toherinaEfa anisan’ny antoko mpanohitra, ohatra, ,ny AKFM tamin’ny Repoblika I. Ny ideolojia nitondrana an’i Madagasikara no notoheriny. Rehefa tonga ny Repoblika II, nifanaraka amin’ny ideolojiany ny foto-kevitra naroso: manohana izy. Tonga ny Repoblika III nisesisesy izay nankany amin’ny ideolojia liberaly, nanohitra indray ny antoko.Arakaraka ny ideolojia itondrana ny firenena no anoherana na anohanana. Raha mbola anatin’ny ideolojia iray ihany ny rehetra, ary ny samy ao anatin’ny ideolojia liberaly, ohatra, no mifanohitra: tsy fanoherana, angamba, izany fa fifandrafiana. Tokony hahitsy izay fomba fanaovana politika izay eto Madagasikara.Misy olana ny lalànaMisy olana ny momba ny lalàna. Marina fa nivoaka amin’ny maha lalàna azy izany. Nefa tsy mbola feno ny didim-panjakana, ka samy manana ny andikany azy izay sahy misintona ny lalàna amin’izay heveriny fa mahametimety azy.Ny Tim, ohatra, milaza fa izy no tokony ho lehiben’ny mpanohitra. Milaza ny lalàna fa ireo antoko nandray anjara tamin’ny fifidianana ka manana solombavambahoaka be indrindra ao anatin’ny Antenimierampirenena no lehiben’ny mpanohitra.Etsy andaniny, misy ireo mpanohitra lalandava na ny fitondrana teo aloha na ny ankehitriny, milaza fa ny fivoriamben’ny antoko mpanohitra mijoro ara-dalàna rehetra ary nanora-tena ho mpanohitra no manonona izay ho lehiben’ny mpanohitra.R.Nd.L’article Rakotomanga Eric: “Tokony hazava izay toherin’ny mpanohitra” a été récupéré chez Newsmada.
Mpitandro filaminana : Homena lanja ny vehivavy
Raha ny fenitra manerantany tokony ny iray ampahadimy ny mpisehatra amin’ny tontolon’ny fitandroana ny filaminana dia vehivavy. Toy ny firenena rehetra manerantany anefa mbola tsy voahaja izany eto Madagasikara. Olana, tsy mankatoa ny fisian’ny vehivavy amin’ny andraikitra sarotra ary eritreretina fa an’ny lehilahy. Eo koa ny lafiny foto-drafitr’asa satria sarotra no mandany vola ny fanantanterahana izany, hoy ny Sekretera maharitra momba ny fandriampahalemana ao amin’ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana satria tsy maintsy arovana ny maha mampiavaka azy amin’ny maha vehivavy azy izay. Fa na izany aza anefa, efa maro ihany ny vehivavy mandranto fianarana ao amin’ny akademia miaramila, sekolin’ny polisy ary ny zandarimaria kanefa mbola tsy ampy izany. Manoloana izay indrindra, hisy ny fanomezana lanja kokoa ny maha malagasy antsika ireo vehivavy ireo mba handray anjara mavitrika amin’ny fidirana ho mpitandro ny filaminana na ao amin’ny tafika, hoy hatrany ity Sekretera maharitra momba ny fandriampahalemana ao amin’ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana, ny Jeneraly Rakotonirina Léon Richard. Tafiditra ao anatin’ny firenena hanaovana fanentanana ny hanomezan-danja ny vehivavy amin’izay fenitra ny fandriampahalemana izay i Madagasikara ary isan’ny ezaka atao anatin’ilay rafitra fanovana momba ny sehatra ny fandriampahalemana. Izany hoe, hisy ny fanovana fomba fijery amin’ny fametrahana ny vehivavy amin’ny sehatra tokony hisy azy ary hanohana an’i Madagasikara amin’izany sehatra izany ny firenena mikambana amin’ny alalan’ny fanitsiana ny rafitry ny filaminana. « Zavatra midadasika ny fitandroana ny filaminana. Eo ny fitandroana ny filaminana fotsiny fa eo koa ny fandraisana anjara amin’ny fitandroana ny filaminana na mpitsara na polisy na zandary izay vao manana anjara toerana eo amin’ny mpitandro ny filaminana. Raha tarehimarika ny jerena, ny polisy efa ela no misy vehivavy fa aty amin’ny tafika no voahaingana ihany. Efa nisy ny vehivavy manam-boninahitra nitondra kaompania anivon’ny tafika tao amin’ny akademia miaramila, misy manam-boninahitra vehivavy amin’izao fotoana izao mpanamboatra fiaraha-manidina ao amin’ny “base aeronavale” Ivato”, hoy ny fanamarihan’ny Sekretera maharitra momba ny fandriampahalemana ao amin’ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana, ny Jeneraly Rakotonirina Léon Richard. Nampahafantarin, omaly, teny Anosy tamin’ny alalan’ny atrik’asa ny zava-misy momba ny fampandraisana anjara ny vehivavy amin’ny sehatra ny fandriampahalemana, izay tena mbola mila ezaka araka ny fanamarihan’ny firenena mikambana. Laurena Nany L’article Mpitandro filaminana : Homena lanja ny vehivavy est apparu en premier sur .L’article Mpitandro filaminana : Homena lanja ny vehivavy a été récupéré chez Triatra.
Alaotra : manomboka miakatra ny vary jeby
Ho voavonjy? Manomboka masaka ireo vary novolena amin’ny sisin’ny farihin’Alaotra. “Vary jeby” no fiantso azy io aty an-toerana. Ny morona atsinananan’ny farihy tsy lavitra ny farihy ireo tendrombohitra any ka tsy misy ny lemaka azo ambolena vary. Ny vary jeby dia eny amin’ny toerana nialan’ny ranom-parihy rehefa misintona ny rano rehefa maintany ny fambolena vary jeby. Na anaty farihy mihitsy aza no volena satria ifandrombahana ny toerana.Mahavonjy, indrindra tamin’ity ny vokatra vary jeby satria tao Ambatosoratra, ohatra, tsy ela izay, dia tena tsy nisy vary fotsy niakatra tsena azo vidina.”Lasa namonjena ireo tratran’ny kere any atsimo, hono, ny vary e!”,hoy ny bitsibitsiky ny lavanify! 600Ar ny kapoakan’ny vary fotsy ao Ambatondrazaka amin’io.Ringana ny ala zetra sy ny bandroSaingy tsikaritra koa ny fanimbana ny tontolo iainana. Satria fongana ny ala zetra any Ambatosoratra, fonenan’ny varika bandro, tsy hita raha tsy ao amin’ny farihin’Alaotra irery ihany fa navadiky ny mponina ho tanimbary jeby izany. Manomboka manimba koa ny any amin’ny tapany andrefana, any amin’ny manodidina ny distrikan’Amparafaravola. Anarivony hekitara no efa ringana ka tena sahirana ny fikambanana iraisam-pirenena Durrell, amin’ny fiarovana azy. Tsy tsapan’ny mponina intsony ny lanjan’ny tontolo iainana fa aleo ihany ny vary.Rarivo sy Njaka A.L’article Alaotra : manomboka miakatra ny vary jeby a été récupéré chez Newsmada.
Tampenana ny lavadavaka: ampiasaina ny godirao “Rapid Aszfalt”
Tsy nisy an-taona maro! Miverina tsikelikely ny fikojakojana lalana ataon’ny sampandraharaha misahana izany ao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Voakasik’izany ireo lavadavaka madinika, hisorohana ny fandaniam-bola mihoa-pampana ho an’ny fanjakana foibe, raha diso miitatra ny lalana simba. Nanomboka ny herinandro lasa teo ny asa, ary anisan’ny ampiasaina natao andrana ny teknolojia “Rapid Aszfalt”, vatokely ampiarahina amin’ny godirao manokana.Nambaran’ny tompon’andraikitry ny CUA fa raha mahomby ity fomba vaovao ity, ampiasana azy ny lavadavaka rehetra eto an-dRenivohitra.Ankoatra ny godirao, amboarina arenina koa ny lalana rarivato, toy ny eny Ampasampito ary nitohy any amin’ny lalana hafa. Mora amboarina tokoa izy ireny satria averina alahatra tsara ny rarivato dia vita.Njaka A.L’article Tampenana ny lavadavaka: ampiasaina ny godirao “Rapid Aszfalt” a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Famaranana ny «Can 2019»: hanala vela amin’i Alzeria i Senegal, anio
Hifantoka any Alzeria avokoa ny sain’ny besinimaro, amin’ity anio ity. Ho fantatra eo mantsy izay handrombaka ny amboaran’i Afrika, taranja baolina kitra “Can 2019”. Hiady izany, ny Liona-n’i Teranga avy any Senegal sy ny Fennecs-n’i Alzeria.Hitodika ao amin’ny kianja Cairo Stadium avokoa ny mason’ny rehetra, amin’ity zoma ity, hiatrika ny famaranana hiadiana ny amboaran’i Afrika, taranja baolina kitra “Can 2019”, andiany faha-32. Hamarana izany, ny Liona-n’i Teranga avy any Senegal sy ny Fennecs-n’i Alzeria.Ekipa diso mifankahalala tsara ny roa tonta, satria efa niray vondrona tamin’ity “Can 2019” ity. Raha tsiahivina, resin’i Alzeria, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0 tamin’izay, ny Senegaly. Hanala vela izany, eto ry Sadio Mané. Hatreto, tsy mbola nandrombaka ny “Can” mihitsy ny Liona avy any Teranga. Fanindroany amin’izao, ry zalahy no tonga eo amin’ny famaranana. Ny voalohany, tamin’ny taona 2002, saingy resin’ny Liona tsy voafolak’i Kameronina, izy ireo, tamin’izany. Ity no famaranana fanindroany.“Hiezaka izahay, hamafa ny nofy ratsy, tamin’ny taona 2002, ka hitady fandresena. Fanalana vela ihany koa ity ka tsy maintsy hiady mafy ny mpilalao rehetra, handrombahana ny amboara”, hoy i Alliou Cissé, mpanazatra senegaley.Etsy an-kilany, mikendry ny hamerina ny anaram-boninahitra efa azony, 29 taona lasa ry zareo Alzerianina. Ny Fennecs no ekipa nahavita dingana tsara indrindra tamin’ity “Can 2019” ity satria tsy mbola resy na nanao ady sahala mihitsy izy ireo, nanomboka tany amin’ny fifanintsanana ka hatreto amin’ity famaranana ity.Manana olana ny Liona-n’i Teranga, amin’ity famaranana ity satria tsy afaka ny hiakatra kianja i Kalidou Koulibali, vodilaharana mahatokin-dry zareo Senegaly, noho ny fahazoany karatra mavo roa. Na eo aza izany, nanambara i Cissé, fa vonona ny mpilalaony ary tsy matahotra na manana ny fahaiza-manaony aza, i Riyad Mahrez. Tompondaka L’article Kitra – Famaranana ny «Can 2019»: hanala vela amin’i Alzeria i Senegal, anio a été récupéré chez Newsmada.